NEWS - High Profit Holding Fish Games. Customize Game Software. Excellent makabhati.
musha » NEWS
Na admin pa 2019-12-04 17:12:33
Kupfura Iyo Hove Game Ocean king3 Plus Phoenix Avengers Sumo dzehove Enda kune system - kugadziridzwa kwemaitiro - nhanho yekusangana. Iyo isinganzwisisike chikamu paramende inogona kuiswa seTSI kana KUKODZESA kugadzirisa zvinopesana. Guangzhou Time-Space kuchangamuka Technology Co., Ltd. nepamusoro 20 makore 'ruzivo akatarisana nekutsvaga nekuvandudza, kugadzirwa uye kutengesa. Isu tinoita Ocean King Fish Huru mutambo akateedzana nepamusoro kubatisisa uye tiwane yakawanda purofiti. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira hove muvhimi mutambo mutambo, hove vhidhiyo kubhejera mutambo muchina, hove muvhimi kubhejera mutambo muchina, Hove Hunter Arcade Game, Slot Game Machine, Kubhejera Slot Machines，zvichingodaro. Tikugashirei kuti utibvunze.
Na admin pa 2019-08-22 17:08:08
Isu tiri nyanzvi yekugadzira michina yekuredza nemitambo yekubata hove. Isu tine hupfumi hwezvemabhizimusi ruzivo rwekupa zvigadzirwa zvinogutsa uye mabasa kune vatengi vedu vepasirese. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira michina yekuredza, hove dzekuvhima hove, hove kupfura mitambo, kuvhima uye hove mitambo. Kugamuchirwa kuti utibate. Hove Tafura Yekubhejera Ocean King 3 Uyezve Dhiragoni Mukadzi wePfuma Kuunzwa kwehove Enda kune system - kugadziridzwa kwemaitiro - nhanho yekusangana. Iyo isinganzwisisike chikamu paramende inogona kuiswa seTSI kana KUKODZESA kugadzirisa zvinopesana. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve hove yekuvhima hove, hove kupfura mitambo, hove muvhimi arcade mutambo, hove kupfura mitamboetc muchina, zvichingodaro, iwe unogona kutibata nesu.
Na admin pa 2019-08-14 10:08:41
Isu tinogadzira muvhimi wehovhoni arcade mutambo, hove kupfura mutambo, gungwa mambo hove arcade mutambo, zvichingodaro. Tine 10 makore ruzivo mukugadzira. Kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu. Hove Kupfura Game Ocean King 3 Uyezve Blackbeard's Hasha Kusvitswa kwehove Go to system - kugadziridzwa kwemaitiro - nhanho yekusangana. Iyo isinganzwisisike chikamu paramende inogona kuiswa seTSI kana KUKODZESA kugadzirisa zvinopesana. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Ocean mambo arcade mutambo, hove muvhimi arcade mutambo, etc., iwe unogona kutibata nesu.
Na admin pa 2019-07-24 17:07:28
Isu tiri vanogadzira veChina zvigadzirwa. Tinogona kupa akawanda mhando zvine hukama zvigadzirwa, semitambo yekuredza, hove dzekuvhima mitambo, tafura yehove arcade mutambo, hove muvhimi mutambo wemuchina, zvichingodaro. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveizvi, kugamuchirwa kuti utibate! Ocean King 3 Uyezve Kupisa Moto chiratidzo chehove nyowani kupfura mitambo kubva kuTAS. Ocean King 3 Uyezve Kupisa Moto ndiyo yazvino mu Ocean King 3 Uyezve nhevedzano uye inogona kugadzirirwa vatambi ve2 ~ 10. Arcade Hove Shooting Mitambo bhosi: Kurira Dragira Kana mutambi abata Radha Dragon , keteni ichakandirwa kunze kuti ibate uye ichipinda Muitiro Wekurwa. Munguva yekurwa, smash yega yega yakakonzerwa nedhiza inokanda…
Na admin pa 2019-07-15 10:07:52
Isu tinogadzira muchina wekuredza, hove kupfura mutambo muchina, muvhimi wehove arcade muchina, slot muchina, hove dzekuvhima mitambo, zvichingodaro. Tine 10 makore ruzivo mukugadzira. Kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu. Hove Tafura Magemhu: Ocean King 3 Plus Blackbeard raMwari Fury: Ndiro razvino mu Ocean Ocean 3 Uyezve nhevedzano. Ocean King 3 Plus Blackbeard's Fury inogona kugadzirwa ye 2 ~ 10 vatambi uye akasiyana Fishing Games Arcade Tafura. Ghost Shipping yeBlackbeard Kana mutambi abata zvikwata zveBlackbeard's Ghost Ship boka reMweya Ships dzinoenda nepakati kuti dzibate zvese pachiratidziro.. Poseidon Kana Poseidon ikabatwa nemafungu mashoma ekurwisa kwePoseidon kuchabatsira mutambi kubata hove dzakawanda sezvazvinogona.. Emperor Crab Kana mutambi abata Emperor…
Na admin pa 2019-07-06 11:07:44
Isu tiri vanopaidzi vepasi rese vekutengesa hove michina. Kubva pakagadzwa, kambani yanga iri kuomerera kuhunyanzvi hwekuvandudza pfungwa uye yakatarisana mukugadzirwa kwemitambo yekuredza mitambo. Iyo kambani yakaunganidza boka revashandi vekuvhiresha nyanzvi yekugadzira matarenda ane makore mazhinji echiitiko, uye yakazvipira kupa vatengi nemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye mushure mekutengesa. Isu tine kugona kupa vatengi vedu uye vatengi hunyanzvi, mhinduro uye masevhisi munzvimbo dzakawanda. Izvo zvikamu zve 8 Vatambi Ocean King Hove Game Meshini inosanganisira: 1. Game Kits Kugadzikana chirongwa PCB chikuru bhodhi. Chidimbu chinowanikwa sarudzo: VGA, DVI, HDMI. Anti- Kubiridzira I / O bhodhi. Akangwara Decoder 2. Inoshanda system ICT bhajari inobvuma basa kumadhora eUS 1-100, imwe mhando…
Na admin pa 2019-07-03 18:07:32
In 1895, Charlie Fey naJzplay Com vakagadzira yekutanga yekutengesa slot muchina. Iyo yakagadzirirwa matatu reels mukati, coin-inoshanda slot, nesimbi yakakandirwa inotenderera muchina kunze. Munguva pfupi, michina yeSlot yakava ndiyo mainstay yebar, makasino uye kunyange zvitoro zvakawanda zvechitoro. Vanhu vazhinji vanofarira kwazvo muchina uyu wemashiripiti unoita kuti vanhu vafume usiku humwe. Nenguva isipi muchina wacho unowanzo vhurika. Sezvo technology inofambira mberi, rakashanduka kuva akasiyana siyana mhando. Muchina wetsvina imhando yemuchina unobhejera neshanduko. Iyo inonzi zita nekuti ine tiger chip. Muchina wekutambisa une mafirita matatu egirazi ane maitiro akasiyana. Mushure mekunge mari yacho yadhonzwa, tsvimbo ichatanga…
Na admin pa 2019-07-02 16:07:05
Isu tiri vanogadzira veChina zvigadzirwa. Tine hupfumi hwebhizimusi ruzivo. Isu tinopa zvigadzirwa zvinogutsa uye mabasa kune vatengi vedu pasi rese. Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira hove mutambo tafura kubhejera michina, hove Arcade mutambo , hove mutambo wemuchina, zvichingodaro. Kugamuchirwa kuti utibate. Type yemhando yepamusoro yekuredza: 1. Muchina wekare wekare weplatinamu Muchina weplatinamu wakakamurwa kuva mhando mbiri, imwe ndeye strip mhando platin muchina, uye switch yayo nekumusoro inodzorwa neyemagnet field inogadzirwa neaya strip mhando iron. Iyo imwe yakagadzirwa neEI kana EE iron core, kusanganisa nechero yakaitwa switch yekudzora, iyo yekupedzisira nhanho ndiyo yakananga kubudiswa kweiyo shanduri. 2. Magetsi Platinum Machine: Magetsi Platinum…
Na admin pa 2019-06-29 11:06:58
Muchina wekuredza ndeimwe yemitambo yakanakisa consoles pamusika. Mutambo unoshandisa mana-munhu muchina uye matanhatu-vanhu muchina wevanhu vazhinji kutamba panguva imwe chete. Vatambi vanogona kutamba mumhando dzakasiyana siyana, uye tanga kubata hove cannons kuhwina hove dzakasiyana dzemhando dzakasiyana uye mavara ari mumufananidzo. Mukati memutambo, kuwedzera kune zvakajairika hove hoverengero, kune zvakare akasiyana akasiyana madiki akadai seakanyanya zvombo, hove dzehove, pearl mabhokisi, mibairo mikuru, etc., kukurudzira mutsipa wemutambi, kubvumira vatambi kunakidzwa kwakawanda kunonakidza uye zvimwe zvinoshamisa. Zvemushini wekubata hove： 1. simba rakakwirira, yakakwirira yazvino, kushanda kwakanyanya uye kuchengetedza simba. 2. Aihwa…
Na admin pa 2019-03-04 15:03:45